Ithanga Sponge Cookies | Ukupheka kweKhitshi
UMaria vazquez | 20/02/2021 10:00 | Postres
Ukuba kukho enye into endiyithandayo malunga neicookies ngokubanzi, yindlela ezixineneyo ngayo, yiyo loo nto ndandithandabuza malunga nokuzama ezi zinto. Iibhisikidi zebhiskithi, ibonakaliswe kukuqaqamba kwayo kunye nentliziyo ethambileyo. Nangona kunjalo, andinakuthetha enye into ngezi cookies zesiponji zamathanga kodwa ndiza kuziphinda.
Ithanga sisixhobo esifanelekileyo ukulungiselela zombini iiresiphi ezinetyiwa njengeelekese. Ukudityaniswa kwayo kunye netshokholethi emnyama kwiikeyiki kunye neebhiskithi zibonelela ngokulingeneyo phakathi kwamnandi kunye nomuncu endikuthandayo. Kwaye ezi cookies azikho ngaphandle.
Unga yenza ngaphandle kwetshokholethi emnyama, kodwa oku akuboneleli ngokukrakra koku kuluma kuphela, kukwenza ukuba ubone imibala eyahlukeneyo kuyo xa uluma. Ke ezi cookies ziyonwabile ngeglasi yobisi okanye ikofu. Ngoku ke lumka kuba baya kuthabatha isiqingatha seglasi ngaphambi kokuba uyazi.
Iibhisikidi zethanga zi crispy ngaphandle kwaye zithambile ngaphakathi. Zonwabele ngeglasi yobisi okanye ikofu ezinzulwini zobusuku.
200 g. Ithanga elosiweyo
I-100 g. Yeoyile ye-olive
120 g. iswekile
Kwisitya sabetha ithanga ngeoyile ye-olive kunye noshukela de kufezekiswe intlama engaphezulu okanye encinci.
Kwesinye isikhongozeli sidibanisa umgubo ocoliweyo kunye negwele leekhemikhali.
Sidibanisa ezi zithako zomileyo kwezimanzi kancinci kancinci, ukuxuba kunye ne-spatula ukuze zidityaniswe kakuhle kwintlama.
Ukugqiba sidibanisa iichips yetshokholethi kwaye siyaxuba kwakhona.
Ngoncedo lweetispuni ezimbini, sithatha iinxalenye ezincinci zentlama kwaye sizibeka kwitreyi yokubhaka enephepha lesikhumba, enomgama omncinci phakathi kwazo.
Bhaka ngo-180ºC kangangemizuzu engama-20, malunga.
Emva koko, siyeke iibhiskiti zethanga zipholile kurufu ngaphambi kokungcamla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Postres » Cookies zeebhiskithi zethanga
Ndiyifumana iresiphi enomdla enokwenziwa ngoncedo lwentombi yam ethanda ukupheka.
Ndithengile iprosesa yokutya eyiMambo 10090 kule webhusayithi kwaye ndijonge phambili ekuzameni iindlela zokupheka ezininzi ukubona ukuba ziphuma njani.
Ngaba ungayilungisa inhlama kunye neprosesa yokutya?